Olana eo Amin’ny Fianakaviana Eran-tany
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Maresaka Momba ny Fianakaviana
Maro ny olana atrehin’ny fianakaviana. Manampy azy ireo ho sambatra anefa ny torohevitra ao amin’ny Baiboly, izay tsy mety lany andro.
Milaza ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana fa tokony hanomboka hampinono ny zanany ny reny, ao anatin’ny adiny iray aorian’ny ahaterahany. Nono fotsiny no tokony ho sakafon’ilay zaza mandritra ny enim-bolana. Milaza anefa ny solontenan’ny UNICEF any amin’ny faritra atsimo sy atsinanan’i Afrika, fa mbola miely be any ilay hevi-diso hoe “mitovy amin’ny rononon-dreny ihany ny vovo-dronono atao amin’ny biberao.”
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? “Mino ny teny rehetra reny ireo mbola tsy dia nandia fiainana, fa ny malina kosa mandinika ny diany.”—Ohabolana 14:15.
Nilaza ny mpikaroka any Montréal fa atahorana kokoa hatavy loatra ny ankizy raha hentitra loatra ny ray aman-dreniny sady zara raha maneho fitiavana. Tsy atahorana hitranga kosa izany raha be fitiavana izy ireo nefa miezaka hifehy ny zanany.
FANTATRAO VE? Efa ela be ny Baiboly no nilaza hoe inona no fomba tsara indrindra hitaizana ny ankizy.—Kolosianina 3:21.
Nanaovana fanadihadiana ny fianakaviana holandey sasany. Samy miasa ny mpivady ao amin’ireo fianakaviana ireo. Hita fa mifandray kokoa amin’ny zanany ny ray aman-dreny rehefa tsy avelany hanelingelina ny andraikiny ao an-tokantrano ny asany. Mety tsy hiraharaha ny zanany, ohatra, izy ireo raha manao antso an-telefaonina mifandray amin’ny asa rehefa ao an-trano.
ERITRERETO IZAO: “Ny zava-drehetra dia samy misy fotoana voatondro ho azy avy.”—Mpitoriteny 3:1.